Ongo, MOB Partner to Offer Digital Services | Myanmar Business Today
HomeInvestment & FinanceOngo, MOB Partner to Offer Digital Services
Leading B2B digital payment service provider Ongo and Myanmar Oriental Bank (MOB) on January 13 announced their latest partnership to enable customers to easily access their bank accounts via Ongo’s mobile app.
Using the integrated services, customers will be able to conveniently and freely move money into their MOB savings accounts, earning an interest, as well as move money into Ongo’s mobile wallet for transactions, according to the partners.
“We are thrilled to partner on another front-line project together with MOB,” says Ongo CEO Allen Gilstrap. “In 2018 we teamed up with MOB to provide the country’s first digital payroll services to employees. Today I am proud to announce another partnership that will similarly aim to modernize and advance Myanmar’s digital economy.”
“At MOB, we believe delivering superior service to our customers requires leveraging partnerships with advanced capabilities,” said MOB chief executive Dominic Notario. “Developing digital services in-house requiresasignificant upfront investment in infrastructure and people with technical capabilities that can be hard to find inanew market like Myanmar.”
The launch ofanew application programming interface will integrate MOB’s core banking system and Ongo’s services and customer bases, so that customers of both organizations can easily take advantage of banking and digital services through their mobile phones.
မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ် (MOB) ကို အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် Ongo မိုဘိုင်းလ် app ကို အသုံးပြု၍ ငွေစုစာရင်းကို အလွယ်အကူ စီမံခန့်ခွဲနိုင်မည်
Ongo e-Money နှင့် မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ် (MOB) တို့သည် ၎င်းတို့ customer များအတွက် Ongo မိုဘိုင်းလ် app ကို အသုံးပြုပြီး ငွေစုစာရင်းများကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်အတွက် ဇန်နဝါရီလ ၁၄ရက်နေ့တွင် ပူးပေါင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Ongo ၏ e-Money မိုဘိုင်းလ် app ၏ နောက်ဆုံးပေါ် one-stop feature တွင် မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ် (MOB) ၏ customer များအတွက် ငွေစုစာရင်းကို မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းပေါ်တွင် လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး app အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ငွေစုစာရင်းများထဲသို့ ငွေပေးသွင်းခြင်း၊ ငွေထုတ်ခြင်း နှင့် Ongo e-wallet များတွင် အလွယ်တကူ ငွေလွှဲခြင်းများကို လွယ်လင့်တကူ ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
“Ongo က MOB နဲ့ အတူ ရှေ့တန်းပရောဂျက်တစ်ခုကို လက်တွဲဖော်ဆောင်ခွင့် ရတဲ့အတွက် တကယ်ကို ဝမ်းသာရပါတယ်။ ၂၀၁၈ တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးသော ဒစ်ဂျစ်တယ်လ်စနစ်သုံးပြီး လစာငွေပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို MOB နဲ့ လက်တွဲပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်လ် စီးပွားရေးအတွက် ခေတ်မီအဆင့်မြင့်တဲ့ ခြေလှမ်းသစ်တစ်ခုကို လျှောက်လှမ်းဖို့ ထပ်မံလက်တွဲရတဲ့အတွက်လည်း ဂုဏ်ယူမိပါတယ်” ဟု Ongo ၏ CEO ဖြစ်သူ Allen Gilstrap က ပြောသည်။
ထိုကဲ့သို့ ပူးပေါင်းလိုက်ခြင်းကြောင့် အဖွဲ့အစည်း (၂)ခုလုံး၏ customerများသည် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းမှတစ်ဆင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းများနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်လ်ဝန်ဆောင်မှုများကို အလွယ်တကူ ရယူအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer တွေအတွက် အဆင့်မြင့်ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်ဖို့ဆိုရင် ခေတ်မီနည်းပညာ၊ ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ဖို့ လိုတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ နိုင်ငံတွင်းမှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်လ် ဝန်ဆောင်မှုတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ဆိုရင် လိုအပ်တဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်တွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလို ဈေးကွက်သစ်မှာ ရှာဖွေရခက်ခဲနိုင်တဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် သိသာထင်ရှားတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်” ဟု MOB ၏ CEO ဖြစ်ခဲ့သူ Mr. Dominic Notario က ထပ်မံဖြည့်စွက် ပြောသည်။
MOB နှင့် Ongo ၏ ဝန်ထမ်းများသည် ယခုလမှစတင်၍ MOB ငွေစုစာရင်းနှင့် Ongo mobile wallet တို့အကြား ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်းအား ပထမဆုံး စတင်အသုံးပြုကြမည်ဖြစ်ပြီး သုံးလပတ် နောက်ပိုင်းတွင်မူ MOB နှင့် Ongo အသုံးပြုသူ customer များက အဆိုပါ ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Ongo သည် Ronoc Myanmar Limited ၏ အမှတ်တံဆိပ်အမည်ဖြစ်ပြီး Ongo သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိမြို့ပေါင်း (၇၃) မြို့ရှိ Ongo agent ပေါင်း (၁,၉၀၀) ကျော်ဖြင့် ကော်ပိုရိတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ပေါင်း (၁၄၀)၊ ကုန်သည်ပေါင်း (၂၆,၀၀၀) ကျော်နှင့် အသုံးပြုသူပေါင်း (၇၅၀,၀၀၀) တို့အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် ငွေပေးချေမှု ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Previous articleiMyanmarHouse Opens Myanmar’s First Real Estate Call Center
Next articleWith Demand Rising, Airlines Add Flights to India